Ukuvulwa ngokugcwele kwemingcele yase-US ezivakashi ezigonywe ngokuphelele sekudlule isikhathi
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-USA Izindaba Ezintsha » Ukuvulwa ngokugcwele kwemingcele yase-US ezivakashi ezigonywe ngokuphelele sekudlule isikhathi
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • ICanada Breaking News • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • IMexico Breaking News • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Ukuvulwa ngokugcwele kohambo lwamazwe omhlaba oluya e-United States kubantu abagonywe ngokuphelele kudlulelwe isikhathi futhi kuzohlinzeka ngomnotho wase-US, amabhizinisi okuhamba amakhulu namancane, nasezindaweni eziya kulo lonke elaseMelika.
Izivakashi ezigonywe ngokuphelele zizovunyelwa ukungena eMelika ngokuwela umngcele womhlaba oqala ekuqaleni kukaNovemba.
Izikhungo Zokulawulwa Nokuvikelwa Kwezifo azikanqumi ukuthi imiphi imigomo i-US ezowamukela.
Usuku oluqondile lapho imikhawulo yezokuvakasha izosuswa luzomenyezelwa "maduzane".
Iziphathimandla eziphezulu zase-US zimemezele ukuthi kusukela ekuqaleni kwenyanga ezayo, UMnyango Wezokuphepha Kwasekhaya e-US izokhulula izivakashi ezigonyelwe ngokuphelele i-coronavirus kusuka kwimikhawulo engabalulekile yokuhamba njengamanje esebenza kuyo yomibili imingcele yomhlaba wase-US.
Le mithetho, ezomenyezelwa ngokusemthethweni nguNobhala Wezokuphepha Kwasekhaya u-Alejandro Mayorkas namuhla, izobandakanya imingcele yomhlaba kanye nokuwela izikebhe. Ziyafana kodwa azifani nezidingo ezihleliwe ezimenyezelwe ngenyanga edlule zabahambi bezindiza bamazwe aphesheya, kusho izikhulu.
Usuku oluqondile ekuqaleni kukaNovemba lapho kuzosuswa imikhawulo luzomenyezelwa "maduzane," kusho esinye sezikhulu zase-US.
Amasiko e-US kanye nokuvikelwa komngcele bazokwamukela iphepha noma ubufakazi bedijithali bokugoma, kusho izikhulu zase-US. I- Amasevisi Okulawula Nokuvimbela Izifo (CDC) akakanqumi ukuthi imiphi imishanguzo i-US ezowamukela, kusho izikhulu.
I-US Travel Association ikhiphe isitatimende esilandelayo ngesimemezelo sokuthi imikhawulo ekuhambeni komhlaba wase-US neCanada neMexico izosuswa kubantu abagonyiwe:
“Sekuyisikhathi eside i-US Travel inxusa ukuthi kuvulwe kabusha imingcele yomhlaba wase-US, futhi silishayela ihlombe isu labaphathi beBiden lokwehlisa imikhawulo yokungena kwabavakashi abagonyiwe. Lesi senzo sizoletha ukwanda okwamukelekayo kwezokuvakasha kusuka ezimakethe zethu ezimbili eziyimithombo ephezulu yokuhamba okungenayo.
“Ukwehla kokuvakasha kwamazwe omhlaba selokhu kuqale lolu bhubhane kuholele emalini engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 250 emalini elahlekile yokuthumela izinto kwamanye amazwe kanye nemisebenzi engaphezu kwesigidi saseMelika. Imingcele yomhlaba evaliwe yaseCanada naseMexico ibiza umnotho wase-US cishe amaRandi ayizigidi ezingama-700 ngenyanga.
"Ukuvulwa ngokugcwele kohambo lwamazwe omhlaba oluya e-United States kubantu abagonywe ngokuphelele kudlulelwe yisikhathi futhi kuzoletha umdlandla emnothweni wase-US, amabhizinisi okuvakasha amakhulu namancane, nasezindaweni eziya kulo lonke elaseMelika."
Izintelezi zesiqhingi saseLa Digue
Seychelles to Welcome Back Cruise Ships ngoNovemba ...